Maalinta: Diseembar 13, 2018
Hulusi Böler oo reer Tokat ah oo ka socda 06.36, kaasoo naftiisa ku waayey shil tareen xawaare sare oo ka dhacay Ankara subaxnimadii 3, ayaa lagu aasi doonaa berrito magaaladiisa Üzümören. Waqtiga 34, oo leh rakaabka 06.30 ee Anıttepe [More ...]
Sababta Musiibada Tareenka ee Ankara ma aha mid Dayac, waa Fahamka ah in Tareenka u beddela Rant siyaasadeed. [More ...]
Mısra Öz Sel, hooyadeed oo wiilkeedii ku weyday shil tareen oo ka dhacay Çorlu bishii Luulyo, way kacday kadib shilkii maanta ka dhacay Ankara waxayna ku baaqday is casilaaddiisa. 9-sano jir wiil Oguz Arda oo ku sugan Corlu shil [More ...]
Saacadda Shaqada Wareegga Wareegga Isbedelka Deegaanka
Wiishashka barafka ee bartamaha Denizli wuxuu leeyahay dabool baraf leh xilliga qaboobaha iyo qurux kale xagaaga. [More ...]
Digniintii ugu Dambaysay ee Digniinta Dhexe ee TCDD!
Marka loo eego KPSS 2018 / 2 Hagaha Xulashada ee ay ku dhawaaqday Cabbirka, Xulashada iyo Xarunta Meelaynta (ÖSYM), digniin cusub ayaa lasiiyay murashaxiinta doorbidaya TCDD. Cabbiraadda, Xulashada iyo Xarunta Meelaynta (OSYM) ee Madaxtooyada [More ...]
Sababta shilalka YHT miyuu furan yahay horaanta madaxkana?
Madaxa Laanta Ankara ee Ismaamulka Ismacil Ozdemir, soL'a wuxuu soo saaray bayaan kusaabsan sababihii shilka. Özdemir wuxuu caddeeyey in khadka la furay horaantii doorashadii June ka hor inta aan la dhameystirin heshiiska labada sano ee cusboonaysiinta. [More ...]
Shaqaale TCDD oo ku dhawaaqay Sababta Dhabarka Tareenka ee Ankara
Sida tareenka tijaabada u ah, ay TCDD ku qeexday 'tillaabo nabdoon oo dheeri ah iyo amniga', oo u shaqeynaya sidii rakaab safka ka hor bilowga safarka ganacsiga ugu horreeya ' [More ...]
Eskisehir waxay u tartamaysaa shirwaynaha magaalooyinka adduunka
Iyada oo mashaariic horumarineed oo magaalooyinku ay guuleysteen oo ay hirgelisay Dawladda Hoose ee Magaalada Eskişehir, 115 oo ka socota adduunka oo dhan ayaa ku guuleysatay finalka WRI Ross Award halkaas oo magaaladu kula tartameysay mashruuca 200. 9 meel magaalada kala Turkey [More ...]
Varsak-Lara Line ayaa bilowday sifo
Qorsheynta Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalaweynta Antalya iyo Nidaamka Tareenka ayaa sii wadaya in ay dariiqyo cusub ku soo kordhiyaan shabakadda gaadiidka si ay ugu fidiyaan muwaadiniinta adeegyo nabadgelyo, xasilan oo aan kala go 'lahayn. Cufnaanta taraafikada ee magaalada [More ...]
Madaxweynaha ardayda ardayda Menderes Türel, ilaa bilowga isgoyska dabaqa badan ee jaamacada ilaa laga soo galo woqooyi ee la jabiyay bisha Janaayo, xad dhaaf ayaa la sameeyaa, ardayda waxaa la siin doonaa fursad marin badbaado leh, ayuu yidhi. [More ...]
Gaziantep Metropolitan, 336 Mileage ayaa horseeday dib u dhiska
Dawladda Hoose ee Gaziantep, iyada oo ku xidhan baaxadda waddada iyo laamiga ayaa ka shaqeeya sanadkii la soo dhaafay ee 4, kiiloomitir 336 oo waddada laamiga ah ayaa la furay. Iyaga oo doonaya in ay fududeeyaan isku socodka magaalada, Metropolitan-ka ayaa leh [More ...]
Waxaan Dareemayaa Tareenka "Rinjiyeynta Racfaanka ee Xarunta Dhexe, Tansaaniya
Mashruuca Tareenka ee Yapı Merkezi Darüsselam- Makutupora Mashruuc kale oo ka mid ah baaxadda mashariicda mas'uuliyadda bulshada ayaa si guul leh lagu guuleystay. In la fahmo muuqaalka mashruuca DSM ee carruurta iyo in la kordhiyo wada xiriirka lala yeelanayo iskuulada ku xeeran [More ...]
Iyada oo la furayo nidaamka metro-ga koowaad ee wadida gawaarida ee ugu horreeya ee Turkiga, M5 Üsküdar-Çekmeköy metro line, macluumaad cusub ayaa lagu daray dhaqankeena gaadiidka dadweynaha. Tareenka dhulka hoostiisa oo aan lahayn darawal sabab kasta ha noqotee [More ...]